> Resource > Android > Top Five Android Maareeyayaasha Card SD
Telefoonada Android si buuxda galisay waayo-aragnimo tilifoonnada by furo albaab u kun oo Chine, muuqaalada iyo ciyaaraha. Macnaha halkan, maamulayaasha card SD Android adeego sidii qalab ugu fiican ee dhoofinta iyo xaqiijinta macluumaadka ku saabsan desktop. In this article waxaan ku qor doonaa shanta tababarayaasha kuwaas oo ah inta badan lagu kalsoonaan karo oo ku haboon.
Dhamaan shanta codsiyada sare Android card SD Tababaraha taageeraan Windows OS iyo sidoo heli dhawaad ​​brand kasta oo casriga ah Android ama kiniiniga ah.
1. Mobisynapse - Tababaraha codsiga Android card SD badan loo a
Si aad u xirmaan aalad Android la PC, SD Tababaraha kaarka codsiga Android - Mobisynapse waa doorasho wanaagsan. Mobisynapse waa labada qalab nidaam iyo app utility qalabka Android ah. Waxaa syncs Muuqaalka lagala xiriirayo, fariimaha, jadwalka taariikhda, xusuusinta, qoraalada iyo hawlaha loo qabto oo aad ku xidhi kartaa dukaamada in ay PC dhex cable USB ama Wi-Fi. Waxay bixisaa xog gurmad ah iyo sidoo kale dib u soo celinta doorasho. Mobisynapse waa tababare card SD codsiga wajiyo badan Android maxaa yeelay waxa ay u qabata hawlaha kala duwan sida syncing Muuqaalka xiriirada, sawiro / videos. Its user interface waa smart oo toos ah.
Si toos ah syncs xogta la Muuqaalka iyo ma isticmaali Google Xiriirada.
Easy in ay la socdaan macluumaadka nidaamka Android via PC.
Free version laga heli karo.
Synching Calendar mararka lulataa Mobisynapse.
Version ayaa lacag la'aan ah ma taageeri auto u hagaagsan iyada oo loo marayo USB iyo Wi-Fi
2. MOBILedit - tababare heer sare falgal Android card SD
MOBIledit waa tababaraha ugu user-friendly ah Android card SD. Waxay bixisaa portal sahlan si ay u maareeyaan macluumaadka telefoonka aad xogta PC iyo bedelaada qalabka dukaamada iyo macruufka aan Android. Tani Tababaraha card SD Android oo isu xira qalab aad si PC via USB, Wi-Fi, Bluetooth iyo / ama IrDA. Marka xiran, waxaa isla goobtii lagu ogaan doonaa qalab aad Kundarbetsplats iyo files warbaahinta u hagaagsan, liiska xiriirada, entries taariikheed, iyo farriimaha SMS si toos ah. Saaxir waxtar leh kula socodsiin doonta taasoo keentay oo dhan habka loo xirxiro iyo syncing ah. Users ku haboon u heli kara files si joogta ah loo isticmaalo halka on go ah. Haddii aad isku xira via Wi-Fi ka dibna waxaad u baahan tahay in aad u soo dajiyo Xire MOBILedit ka App.
Si fudud ayaa maamusha xogta.
Wareejinta xogta iyo ka jirta noocyada kala duwan
In loo sahlo in ay xiri iPhone iyo Android via Wi-Fi
U dir farriimaha qoraalka ah, archive, searche iyo print
Xogta ku saabsan PC kaliya Update telefoonka.
Ma u muujiyaan qoraalada multi-berrinka ee xiriirada.
Aadka u qaali ah.
Ma bixin Centre Download.
3. MyPhoneExplorer - Tababaraha card SD ah ee Android leh karo gaar ah
Tababaraha card SD ee codsiyada Android jira dad badan oo laakiin MyPhoneExplorer waa tiro saddex boggayaga liiska sababta oo ah handiness iyo hufnaan. Tani card SD Tababaraha app Android for Windows OS syncs jiray cayn kasta oo xogta laga telefoonka ah Android ama Sony Ericsson in aad PC waqti isku mid ah la abuurayo ay gurmad. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan gmail, xitaa nooc jir-dugsiga sida K-700 iyo isku xira PC in phone via infrared, Bluetooth iyo cable. Waa aalad aad u qaadi karo tan iyo markii ay badbaadinayo on drive USB ah waa suurto gal. Waxaa haboon hayn karaa liiska hawsha aad, la xiriir database iyo qoraalo / xusuusinta beehsa. App wuxuu bixiyaa tabs kala duwan ee qeyb kasta oo ka mid ah macluumaadka sida tab u gaar ah xiriirada iyo qabanqaabiyaha si aad u abaabulo si sahal ah qaybaha kala duwan ee aad telefoonka. In ay version cusub, waafaqid app ee qalabka Symbian ayaa la kordhiyay oo ay taageerto UIQ3-Phones hadda.
Si fudud u qabata multitasking.
Doorasho Filter waa la heli karaa iyadoo syncing file.
Updates iyo abuuraa gurmad xogta ah xitaa marka telefoonka aan la xiran.
Habka loo xirxiro adag. Waxaa laga yaabaa in app wuxuu kuu qabtaan iska-ilaalin iyagoo software aan waxtar lahayn oo aad riix laga yaabaa on Haa. Sidaas Iska!
4. AirDroid - Tababaraha kaadhka SD ugu dhaqsiyaha badan u Android
AirDroid ma ahan oo kaliya app kale waa falsafada ah in meesha isticmaalka fiilooyinka USB weligiis. Tani Tababaraha card SD oo lacag la'aan ah Android ka studio cammuudda kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan aad telefoon kula browser web ah. Waa ku dari kartaa ama tir-ada ah ee aad taleefan ka web ah iyo si joogto ah ayaa tilmaamaya doonaa meel bannaan oo laga heli karo kaadhka aad SD iyo xusuusta gudaha. Waxaad uma baahan doono cable USB ah xataa haddii aad telefoon aan loo gayn dhow. Nidaameed xogta aad ka mid yihiin entries taariikheed, xiriirada, sawiro, files multimedia, ringtones, barnaamijyadooda iyo dhammaan astaysto ringtones, xiriirada dejinta / dhoofinta, iibsiga ama wadaagaan files multimedia, qoraalo, iyo maarayn xusuusinta iyo aad u hesho macluumaadka telefoonka aad si fudud u abaabulan via AirDroid. Isticmaal screen weyn desktop ee u jawaabno qoraal fariimaha la AirDroid. Wax walba oo AirDroid waxaa sii daayey ma banki. Waxa kale oo aad u heshaan karo ama xirto qalabka Android aad haddii uu lumo.
No-buunbuuninayo oo jawaab sare User Interface web-ku salaysan.
Easy oo habboon in la isticmaalo la walxood oo waaweyn iyo login soomi / gasho baxay feature.
On-ka-go maamulka xogta waa suurto gal.
Sabuurad shaqo cajiib ah oo waxtar leh.
Qaybta Wireless waa hanti.
No sawir ku habboon feature.
Ma u baahan tahay shabakadaha labada ku computer iyo qalab Android aad.
5. Wondershare MobileGo for Android - kaadhka SD Android Tababaraha ugu wanaagsan ee maareynta socodka xogta culus
Wixii maaraynta xamuulka ee photos, playlists music had iyo goor joogta ah halmar isla dhexeeya fariimaha qoraalka ah iyo barnaamijyadooda Android Wondershare MobileGo for Android waa codsi ugu fiican. Tani Android Tababaraha card SD taageertaa tiro balaadhan oo ah qalabka ay ku jiraan kiniinno. Waxaad dhoofin karo iyo dajiyaan files warbaahinta xad-dhaaf ah, aad u hesho liiska xiriirada updated si toos ah iyo gaadiid iyo ka Outlook. Waxa kale oo ay syncs iyo xogta kala iibsiga xawaare ah la yaabka leh degdeg ah. Waxaad isla hagaagsan kartaa kumanaan xiriirada in Outlook. Waxaa badasha aad PC galay telefoonka ah Android oo aad si fudud u soo diri karaan ama soo jawaabin SMS ah.
User Interface Great.
Waxay abuurtaa iyo updates hayaan ee xiriirada, sawiro, barnaamijyadooda iyo fariimaha qoraalka ah, iwm
Soo celinta xogta waa mid aad u fudud.
Ma syncs photos isu Outlook.
La xidhiidha ayaa laga yaabaa in mararka qaarkood laga badiyay oo ma waxaad heli doontaa fariimaha qoraalka ah waqtigii.